Ifafaalaha rissagas: wuxuu yahay iyo sida uu ku unkan yahay | Saadaasha Shabakadda
Ifafaalaha loo yaqaan magaca rissagas Waa dhacdo ka dhacda bakhaarada qaarkood iyo dekeddaha ku yaal Jasiiradaha Balearic. Waxaa loo tarjumi karaa Isbaanishka sida hangover. Waa dhacdo aad u xiiso badan oo ka kooban oscillation kala duwan oo ku jira heerka badda oo gaari kara ilaa 2 mitir oo ballaciyo ah muddo 10 daqiiqo oo keliya ah. Ma aha dhacdo u gaar ah jasiiraddan, laakiin waa run inay dhacdo marar badan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhamaan sifooyinka, waxyeelada iyo soo noqnoqoshada rissagas ay ku dhacdo.
1 Waa maxay rissagas
2 Sababaha rissagas
3 Xaaladaha cimilada
4 Waqtiga la xidhiidha rissagas
Waa maxay rissagas
Magacaani waxaa sabab u ah dhacdo ku dhacda si isdaba joog ah Jasiiradaha Balearic. In kasta oo ayna u gaar ahayn boggan, haddana way ka dhacdaa dekedda Ciutadella oo ku taal magaalada jasiiradda Menorca.
Markay arrintani dhacdo waxay isu muujisaa inay hoos u dhac degdeg ah ku tahay heerka biyaha ee dekedda. Hoos udhaca qotada dheer, dekedda oo dhan waxay kudhowaad tahay faaruqin daqiiqado gudahood. Natiijo ahaan, doomaha kalluumeysatadu waxay ku dhufteen salka qaar badan oo kalluunka ka mid ahna waxay u dhintaan neef qabatin. Si kastaba ha noqotee, aagagga kale ee dekedda ayaan gebi ahaanba madhan laakiin waxaad arkaysaa hoos u dhac weyn oo ku yimid heerka biyaha. Tani waxay keenaysaa in doonyo badan ay muddo ku xannibmaan.
Daqiiqado ka dib, biyihii ayaa si lama filaan ah dib ugu soo laabtay dekedda taasna waxay keenaysaa in doonyihii oo dhami ay gurguurtaan oo la isku garaaco. Intaas waxaa sii dheer, in badan oo doomaha ka mid ah ayaa quusa oo waxay geystaan ​​waxyeelo ballaaran guud ahaan. Mararka qaar waxaan helnaa biyo faro badan oo lama filaan ah oo sababa xoogaa daadad ah meelaha ku dhow dekedda. Barafkan waxaan ka helnaa saameyn weyn ku leh gawaarida iyo dhismooyinka ku dhow dekedda.
Caadi ahaan dhacdadan ayaa si isdaba joog ah loogu celceliyaa saacado. Mararka qaarkood rissagas ayaa laga helay dhowr jeer isla maalintaas.
Sida lafilayo, ifafaalahaani waa mid layaableh waxaana laysku dayay in la helo sababta asalkeeda. Dhacdadan ayaa lagu yaqaanay in muddo ah, gaar ahaan Ciutadella. Waxaa jira tixraacyo qaar oo ka hadlaya doonyaha ku degay dekedda Ciutadella qarnigii XNUMXaad. Waana in dhammaan mawjadahaasi leeyihiin ballaadhnaan aan caadi ahayn oo ku dhaca muddo gaaban gudaheed.
Caadi ahaan, waxaa lagu xisaabtamayaa in ballaadhinta hirarka cirku ee badweynta Mediterranean ay badiyaa leeyihiin ilaa 20 sentimitir muddo dhawr saacadood ah Tani waa wax ay si dhib yar u arki karto indhaha qaawan. Si kastaba ha noqotee, rissagas waxay ka soo baxaan qiyaaso ka badan 2 mitir oo dherer ah mudo 10 daqiiqo ah.
Asalka rissagas si fiican looma oga ilaa waqtiyadan dambe oo ay jirto aqoon dheeri ah oo ku saabsan saadaasha hawada iyo howlgalka hirarka. Waxaa loo maleynayay in asalka rissagas uu noqon karo xiddigiska. Tan macnaheedu waa inay leedahay nooc hawlgal ah oo la mid ah ta badda. Waxaa sidoo kale loo maleynayay inay yeelan karto asal dhulgariir. Way dhici kartaa sababtoo ah dhul gariirka biyaha hoostiisa mara oo dhaliya mowjado kala duwan oo la weyneyn lahaa si loo gaaro dekedda. Si kastaba ha noqotee, Dhamaan mala-awaalayaashani waxay ahaayeen kuwo ku filan oo awood u leh inay si gaar ah u sharxaan dhacdada. Waxa ugu yar ee lagu macnayn karo waxay ahayd inta jeer ee ifafaale this ifafaale ee beertan gaar ah oo aan kuwa kale.
Sababta dhabta ah ayaa la ogaa 1934, kadib daraasado kala duwan oo ku saabsan isbeddellada aan caadiga ahayn ee heerka badda. Daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in sababta keenta rissagas ay tahay hawo. Isbeddello waaweyn oo lama filaan ah oo heerka badda ah ayaa lala xiriiriyaa isbeddello kale oo lama filaan ah oo ku dhaca cadaadiska Hawada. Xaaladda Ciutadella ee jasiiradaha Balearic waxaa laga soo saaray isdhexgalka jawiga iyo badda. Qorayaasha qaarkood waxay ka fikiraan aragtida ah in rissaga ay soo saarto saameyn ay ku leedahay mowjadaha cufis jireed ee laga soo saaro heerarka dhexe ee troposphere. Mawjadaha cuf isweydaarsiga waxay dhacayaan sababtoo ah jabaqda dabaysha ee ay keento oscillation-ka ee cadaadiska cimilada ayaa ka sarreeya heerka dusha sare.
Waxaa jira xaalado cimilo kala duwan oo sifo gaar ah leh si kor loogu qaado rissagas. 3-da xaaladood ee ugu waawayn ee cimilada leh ee u roon muuqaalka ifafaalahan ayaa ah kuwa soo socda:
Waa inay jiraan dabaylo xoog leh oo koonfur-galbeed ka dhaca heerarka dhexe iyo sare ee goobta loo yaqaan 'troposphere'. Dabaylahaasi waa inay ku horyimadaan meel weel horleh ah oo saameysa Jasiiradda Iberia.
Heerarka ka hooseeya 1500 mitir Waa inuu jiraa tiro hawo tayo leh oo sababi karta jiritaanka heerkul qallafsan oo u dhexeeya heerkan iyo hawada ka saraysa badda. Hawada dusha sare ee badda ayaa tan ka qabow doonta tan.
Waa inay jirtaa socodka dabaysha qayb daciif ah ama dhexdhexaad ah oo dusha sare ah.
Xaaladdan ugu dambeysa haddii aad dhawaan xaqiijisay in aysan gebi ahaanba daruuri u ahayn rissagas inay dhacdo. Rissagas waligeed lagu arkay dabaylo ka imanaya koonfurta ama koonfur-galbeed dusha sare. Khubarada ku xeel dheer saadaasha hawada ee Mediterranean-ka waxay soo gabagabeeyeen in xaaladahan wanaagsan ee jawiga wanaagsan ee rissagas ay dhacaan inta lagu jiro kala bar diiran sanadka. Sidaa darteed, soo noqnoqoshada ugu badan ee dhacdadani waxay dhacdaa inta u dhexeysa Abriil iyo Oktoobar.
Waqtiga la xidhiidha rissagas
Mid ka mid ah dhinacyada aasaasiga ah ee lagu xisaabtamayo saadaalinta kormeerka rissagas waa cimilada jawiga lagu garto xaaladahaas. Maalmihii ku jiray kuwa soo saara rissagas cirka waxaa badanaa lagu daboolaa lakabyo cabaasyo cufan iyo mugdi. Caadi ahaan waa dhif iyo naadir in daruuro ka hooseeyaan, laakiin waa astaamaha cirka oo leh daruuro iyo jaale cariiri awgeed. Qiiqa ayaa u muuqda mid ka soo baxa boodhka ka soo duulaya qaaraddan Afrika.
Waqtiyada kale waxaa jira dhowr daruurood oo kala firidhsan oo aan tilmaamaynin dhaqdhaqaaqyo toosan oo muhiim ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto ifafaalaha rissagas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Rissagas